ကလိုစေးထူး: သဲထိတ်ရင်ဖို အလုပ်...
တရုတ်ခရီးစဉ် အဆင်ပြေခဲ့ကြပါစေလို့ ၀ိုင်း ဆုတောင်းသွားတယ် အစ်ကိုရေ့ ။ ဒီမှာတော့ အလုပ်လျှော့တာတွေ ဘာတွေသိပ်မကြား ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေတော့ပါးတယ် လုပ်ငန်းပိုင်းကြီးကြီးမားမားတွေတော့မပြောတတ်ဘူး
ကျနော်တို့တော့ အိုကေနေတယ်း) ဟဟား အိုကေနေတယ်ဆိုလို့ အလုပ်က စားဖို့လောက်တော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြုတ်တော့လည်းမမှုတော့ နီးနီးလေးရယ် မပူတော့ဘူး hiluxကြီး စီးပြီး အမေ့အိမ် ဒိုးမယ် :P
Mar 24, 2009, 10:44:00 PM
သတင်းတွေကြားရင် ရင်လည်းခုန် စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဗျာ.။ အမျိုးတွေ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ပူနေတာ..။ ကိုစေးထူးကံကောင်းပါတယ်.. ဆက်လက်ကံကောင်းပါစေ..။
နေရထိုင်ရ ရင်တမမ နဲ့
Mar 25, 2009, 12:11:00 AM
ဘာပြောပြော ဈေးကွက်ရှာဖို့ သွားတဲ့ခရီးစဉ်လေး
Mar 25, 2009, 12:34:00 AM
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ
Mar 25, 2009, 1:56:00 AM
Global financial crisis ရဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စပေါ့ဗျာ။
အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ကိုယ်တွေ့ ကို
Mar 25, 2009, 4:55:00 AM
Mar 25, 2009, 6:01:00 AM
နေ့တိုင်းကြားနေရ အကြားစိတ်လာတဲ့ သတင်းဆိုးတွေ ပါပဲ။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ မောင်လေးရေ၊ အများနဲ့ အတူပေါ့။ လူအများစု စိတ်ပူရတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်လာလဲ ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ အကောင်းဆုံးလုပ်၊ ပြုတ်ရင်လဲ ရင်ဆိုင်ရ ပြင်ဆင်ရအုံးမှာပေါ့လေ။ အချင်းချင်း အားပေးခြင်းသာ တတ်နိုင်တယ်။
ရင်နဲ့ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ ရင်နဲ့ ခံစား ဖတ်သွားတယ်။
Mar 25, 2009, 11:56:00 AM
ဒီလိုကာလမှာ ဘယ်လိုပူပင်သောကတွေနဲ့ အလုပ်လုပ် နေရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ၊ မိုးပြိုအများ ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ အနီးအနား ရောက်လာပြီဆိုရင် အတော့်ကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရ တာပါပဲ၊ ကျနော်တို့ဖက်မှာလည်း ဒီနည်းနှင်နှင်ပါပဲဗျာ၊
တရုတ်ခရီးစဉ်ကိုလည်း မျှော်လင့်သလို တဖက်ကလည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးဖြစ်ဖြစ် သွားရင်း လာရင်းကြည့်ထားရင် အပိုမဖြစ်လောက်ပါဘူး၊ အကျပ်အတည်းကြားမှာ အဆင်ပြေပါစေ ကိုကလိုစေးထူးရေ....။
အဆင်ပြေလိ့မ်မယ်...။ တရုတ်ကြီးက သိပ်သဘောကောင်းတာ မပူနဲ့ ဟိ :P
Mar 25, 2009, 6:52:00 PM
စောစောကနောက်လိုက်တာ ဒါက အတည်ရေးတာ..။ (ထူးပါဘူး အတည်ရေးလည်း ဒါပါပဲ ဟီး )
အဆင်ပြေမှာပါ အစ်ကို..။ အဆင်ပြေတယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မပြေဘူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာ သဘာဝအတိုင်း တလှည့်စီသွားနေကြတာပါပဲ..။ ဒါတွေအကိုက ကျွန်တော့်ထက် ပိုသိပါတယ်..။ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲ ရောက်နေရောက်နေ..။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းမွန် ပိုင်နိုင်စွာ ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ စစ်တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ကျောင်းအုပ် ကြီးကမှာတယ်..။ မင်းတို့တွေ
အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင် တော့ သုံးခုစလုံးက ခံဘက်က ကြီးပါပဲ..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တကယ်တမ်း ကြိုးစားကြည့်လို့ နေသား ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ သိပ်ကို မှန်ပါတယ်..။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့အချက်သုံးချက် ကို ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်တာ နဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ပါစေ..။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲနေတတ်သွားပြီလေ..။ ဘယ် လောက်ပဲ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေကြုံတွေ့ပါစေ..။ ကျွန်တော်တို့ ပြုံးနေနိုင်သွားပြီ။ ဒါကျွန်တော် တို့အတွက် ထာဝရအောင်ပွဲပါပဲ အစ်ကိုရေ...။ :)
Mar 25, 2009, 6:59:00 PM
Mar 25, 2009, 11:03:00 PM
တရုတ်ခရီးစဉ်ကြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားတယ် ကိုစေးထူးရေ.. ကိုယ်ချင်းစာတယ်.. ကိုယ်တိုင်လည်း ခပ်လှုပ်လှုပ်တွေကြားထဲ ကျီးလန့်စာ စားနေရသလိုပါပဲ...
Mar 26, 2009, 6:54:00 AM
Mar 26, 2009, 8:16:00 AM
အကိုကလိုစေူးထူး ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး တကယ်ကို သဲထိတ်၇င်ဖို ဖြစ်ရပါတယ်။
စိတ်လဲမကောင်းပါဘူး ။ ခင်ခင်လဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ အစစအစဆင်ပြေပါစေ ...
အဆင်ပြေပါစေ အကိုစေးထူးရေ။ သဲထိတ်ရင်ဖိုဒုက္ခတွေ အမြန်ဆုံး လွန်မြောက်ပါရစေလို့ ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော အားလုံးအတွက်ရော နေ့တိုင်း ဆုတောင်းနေပါတယ်။ :(
Mar 26, 2009, 8:39:00 PM
hi, i read the new in yahoo yesterday, the recession will be end, don't give up. good luck
Mar 27, 2009, 5:33:00 PM
Mar 27, 2009, 5:40:00 PM
ခင်လို့ အကြံကောင်းလေးတခုတော့ ပေးခဲ့အုန်းမယ်။ တွေ့သမျှလူတွေကို ရမ်းသန်းပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်၊ ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သတင်းတွေ စုထား၊ အလုပ်ထဲကလူတွေကို၊ ကျောင်းကလူတွေကို မကျေနပ်လို့ ၀င်သတ်တဲ့သတင်းတွေဆို ပိုကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့တာတွေကို ဘော့စ်ရှေ့မှာ ခဏခဏ ဖတ်ပြ၊ ပြီးတော့ ထိတ်သလိုလို လန့်သလိုလိုနဲ့ပြော “အင်း ဒီအလုပ်မှာသာဆို သေနတ်ပဲလိုတယ်၊ ကျည်ဆန်က အလုပ်ထဲမှာ အဆင်သင့်ပဲနော်” ဆိုတာမျိုး။
ဒါနဲ့အဆင်ပြေရင် ပြန်ပြောအုန်း။ ကလူသစ်လဲ စမ်းကြည့်မလား စဉ်းစားနေတာ :P
Mar 28, 2009, 6:54:00 AM
c box အစား ဒီမှာပဲ အော်ပစ်လိုက်တယ်.
Mar 30, 2009, 7:42:00 AM